Dhibbane Hawaii Coronavirus wuxuu la dagaallamayaa Line Cruise Line-ka Norway
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » saaciday inay » Dhibbane Hawaii Coronavirus wuxuu la dagaallamayaa Line Cruise Line-ka Norway
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • saaciday inay • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • Wararka Hong Kong • Investments • Wararka Raaxada • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wararka Singapore • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
12 min akhris
Pua Morrison oo reer Maui ah, Hawaii waxay noqotay dhibanaha ugu horeeya ee maaliyadeed ee coronavirus-ka Hawaii sababo la xiriira hunguri shirkadeed Norwegian Cruise Line (NCL). Pua waa hooyo Hawaii ah waxayna ka shaqeyneysay warshadaha safarka iyo dalxiiska muddo 45 sano ah. Waxay hadda u shaqaysaa Hawaiian Airlines.
Pua waa wareersan yahay maanta eTurboNews: ”Weligay ma arag shirkad ama shirkad tanoo kale aan cafin oo aan cafin oo aan rabin! Waxay u jeedaysay Norwegian Cruise Line kaasoo qayb fiican ka qaatay keydkeeda nololeed.
Waxay noqon kartaa madadaalo badan oo lagu dalxiis tagayo, laakiin sidoo kale waa ganacsi weyn oo haddii laga hadlayo Noorway Cruise Line waxay leedahay qayb wanaagsan oo hunguri shirkadeed oo lagu daray. Khadka Maraakiibta ee loo yaqaan 'Norwegian Cruise Line' (NCL) wuxuu lahaa dakhli la isku hagaajiyay sanadka 2019 oo ah US $ 1.1 bilyan, siyaasaddooda shirkadeedna way muujin karaan sababta.
Bishii Febraayo 2019 Pua waxay tagtay Costco Travel waxayna ku soo dallacday ku dhowaad $ 30,000 iyada oo loo yaqaan 'Costco Citibank Visa card'. Waxay ahayd inay qoyskeeda 8 ka mid ah u raacdo safar riyo ah. Dalxiiska Jade-ka ee Noorweey wuxuu ahaa inuu isu keeno jiilal ka mid ah qoyskeeda oo tirinaya maalmaha Febraayo 2, 2020. Qoyska Morrisson waxay rajeynayeen inay waqti ku helaan noloshooda markabka Jade-ka Noorweey oo sahamiya Bariga Aasiya iyo Shiinaha.
Noorweey Jade waa markab dalxiis oo loogu talagalay Khadka Maraakiibta ee Norwegian, oo asal ahaan loo dhisay sidii Pride of Hawaii qaybtooda NCL America.
Pua ayaa u sheegay eTurboNews: “Waxaan qoyskeyga uga ballansaday 'Norwey Jade' safar 11 maalmood oo safar ah oo ka bilaabanaya Singapore, oo aan ka sii hakanayo Cambodia iyo Vietnam, kuna dhammaan doono Hong Kong. Waxay ahayd inaan sii joogno Singapore 3 maalmood ka hor markabka iyo 3 maalmood Hong Kong dhamaadka safarkayaga safar. Taariikhda safarkayagu waxay ahaayeen Febraayo 6 oo ka tegaya Singapore.
“Waxay ahayd inaan ka tagno Maui 2-dii Febraayo, laakiin waxaan la aadnaynaa Coronavirus-ka Shiinaha. Waxaan u qaadanayay inaadeerkay oo qaba xanuun sanbabada oo raaga iyo Ayee 80 jir ah oo wadno xanuun qaba
Intaa ka dib, shirkaddu waxay billowday inay baajiso duulimaadyadii, ka dib markii Mareykanku uu soo saaray heer HA safrin digniinta. Horeyba digniinta kahor, barasaabka Hawaii Ige wuxuu usheegay qofkasta oo katirsan gobolkiisa inuu iska ilaaliyo safarka Shiinaha.
Pua waxay la xiriirtay Costco Janaayo 30 si ay u ogaato waxa ay ku qaadaneyso in la baajiyo safarkeeda isla markaana la siiyo sumcad safar kale oo taariikhi ah, ama la soo celiyo lacag celin.
Costco ma uusan dooneynin inuu qaado masuuliyada wuxuuna ka codsaday Pua inay si toos ah ula soo xiriirto norwejiga. Costco sidoo kale kamay jawaabin eTurboNews.
Morrison waxay sheegtay inay ka codsaneysay noorwiijiga labadii maalmood ee la soo dhaafay inay ka ogolaadaan lacag celin ama shahaado safar dalxiis oo mustaqbalka ah, laakiin markasta oo ay qof norweji ah la hadasho, waxay u sheegaan isla isla, ugu dambeyntiina way joojiyeen wicitaankeeda. gadaal u wada noqo.
Waxay u sheegtay eTurboNews, "Sidee noorwiiji u maleyn karaa inuu qof ku raaxeysan doono markab dalxiis marka uu ku geeyo adduunka hubaal la'aanta?"
Markay ahayd 31-kii Jeenwari waxay qadka tareenka ee 'Norwegian Cruise Line' ka jawaabtay oo sheegtay in safarkooda midkoodna aan la beddelin, laakiin ay fulinayaan taxaddarro dheeri ah oo caafimaad, oo ay ku jiraan baaritaanka heerkulka ee rakaabka tagaya Hong Kong. Maraakiibtooda midkoodna kuma xirna berriga Shiinaha.
Pua oo sii hadlay ayaa yiri: “Waan aaminay Costco Travel. Had iyo jeer way soo celiyaan iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin, laakiin markan ayaa ka duwanaa.
“Costco Travel ayaa codsi kale ii soo bandhigtay aniga oo jooga NCL si aan lacagtayda ugu soo celiyo ama aan u amaano boos celiskayaga laakiin NCL ma aqbali doonto!
"Afar ka mid ah qoyskeyga ayaa go'aansaday inaysan qorin lacagta waxayna u amba baxeen Singapore si ay markabka u raacaan si kasta ha noqotee."
Khadka Tareenka ee 'Cruise Line' ayaa soo saaray bayaan 3 maalmood ka dib markii Pua ay ahayd inuu baxo oo wuxuu ku yidhi:
Badbaadada, amniga, iyo ladnaanta martidayada iyo shaqaalahayagu waa mudnaanta koowaad. Waxaan si firfircoon u hirgalinay dhowr talaabo oo kahortag ah oo hoos lagu sharaxay sababo la xiriira walaac isa soo taraya oo ku saabsan infekshinka Coronavirus ee Shiinaha. Waxaan sii wadi doonaa la-tashiga Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo Xarunta Mareykanka ee Xakamaynta iyo Ka-hortagga Cudurrada (CDC) waxaanna qaadi doonnaa tallaabo dheeri ah oo ku habboon sida loogu baahan yahay.
Siyaasadaha hadda jira waxaa ka mid ah:
Martida ka soo safray, booqday ama ku sii gudbay garoomada diyaaradaha ee Shiinaha, oo ay ku jiraan Hong Kong iyo Macau, 30 maalmood gudahood safarkooda safarka, iyadoon loo eegin jinsiyada ay leeyihiin, looma oggolaan doono inay raacaan mid ka mid ah maraakiibteenna. Waqtiga caadiga ah ee ka-hortagga cudurka ee ay aqoonsadeen WHO iyo US CDC ee fayraskan waa 14 maalmood. - Martida loo diido inay raacaan waxaa loo soo celin doonaa lacag celin markay keenaan caddeynta safarka.
Xiritaankii dekedda Hong Kong ee dhowaanahan wuxuu sababi doonaa wax ka beddello xagga socdaalka ah waxaanan la wadaagi doonnaa qorshaha dib loo eegay iyo sidoo kale faahfaahin dheeri ah markii ay diyaar noqdaan.
Xiritaanka dekedda ka hor Hong Kong, waxaan hirgelinay baaritaanno heer kul aan taabasho lahayn oo loogu talagalay dhammaan rakaabka ka duulaya meeshan iyo marti kasta oo diiwaangelisa heerkulka jirka oo ah 100.4 darajo Fahrenheit ama 38 darajo Celsius ama ka sareeya, looma oggola inay raacaan. Martidii ku jirtay safaradan sidoo kale waxaa lagu soo rogay baaritaanka heerkulka markay ka soo laabanayaan safarada xeebaha ee dekedaha laga soo hadlo. - Martidii aan awoodin inay shiraacadaan heerkulka sare awgood ayaa lagula taliyay inay la furaan caymiska safarka shirkada bixiyaha caymiska.
Martida oo dhan, waxaan sii wadeynaa heerka soo-gaadhista kahortaga warbixinta iyo qiimeynta. Martida kasta oo umuuqata astaamo waxay kuxiran yihiin qiimeyn caafimaad oo horu dhac ah oo ay kujiraan laakiin aan kuxirneyn baaritaanka heerkulka sida loo arko inay lagama maarmaan tahay.
Marti kasta oo muujisa astaamaha xanuun neef mareenka ah inta uu saaran yahay waxaa lagu sameyn doonaa baaritaan dheeri ah Xarunteena Caafimaadka waxaana laga yaabaa in lagu karantiilo oo laga dajiyo.
Waxaan hirgelinay borotokoollo nadaafad iyo jeermis dheeri ah oo saaran dhammaan safarada. Nidaamyadan waxaa lagu dhaqangelin doonaa marka lagu daro heerarkeenna nadaafadda ee nadaafadeed ee horay u jiray.
Shaqaalaheena ka soo safray, booqday ama loo sii gudbiyay garoomada diyaaradaha ee Shiinaha, oo ay ku jiraan Hong Kong iyo Macau muddo 30 maalmood gudahood ah looma ogolaan doono inay maraakiibtayada raacaan.
Singapore iyo Filibiin ayaan haatan u ogolaaneynin muwaadiniinta Shiinaha inay kasoo degaan dekadahooda. Martida wata Baasaboorka Shiinaha ee ku socdaalaya safarada ka soo dega mid ka mid ah goboladaan looma oggolaan doono inay la socdaan maraakiibtayada. Haddii xaddidaadaha dekedda ee dheeraadka ah la dhigo waxaa laga yaabaa inaan wax ka beddelno siyaasaddan markii loo baahdo. - Martida loo diiday inay raacaan arintan awgeed ayaa loo soo celin doonaa lacag celin.
Tallaabooyinka kor ku xusan waxay sii socon doonaan illaa ogeysiis dambe waxayna ku xiran yihiin isbeddel waqti kasta markaan qiimeyno xaaladda oo aan sii wadno la-tashiga maamulka caafimaadka ee deegaanka.
NCL ayaa u sheegay eTurboNews:
Jose, afhayeen warbaahineed oo ka socda Norwegian Cruise sida loo sheegay eTurboNews: “Fadlan ogow inaan marwalba ku dadaalno inaan wax ka qabano martideena annaga oo ilaalinayna siyaasadaha ganacsiga iyo dhaqamada aan ku hayno meesha si ay nooga caawiyaan maaraynta xaaladaha sidan oo kale ah. Sababta oo ah dabeecadda xaaladaha lama filaan ah ayaan waxaan si adag ugu talineynaa in martidu helaan caymiska ilaalinta safarka Si ay ugu sahlanaato martideena, waxaan bixinaa dhowr qorshe oo ilaalin safar ah waqtiga ballanta, iyo sidoo kale inta lagu jiro dhowr xiriir oo dabagal ah.
Qorshayaashu waxay u oggolaanayaan caymis xaalado badan. Qorshayaasha qaar waxay martida siiyaan fursad ay ku kansali karaan sabab kasta haku timaadee. Sidoo kale, sidii looga bartay safarka iyo dalxiiska, waxaan soo saarnay siyaasado tirtirid. Iyaga ayaa loo soo gudbiyaa martidayada waqtiga ballansashada iyo cwaxaa laga heli karaa boggayaga internetka "
Pua Waxay Ka Maqashay Qoyskeeda Markab Dushiisa
“Arin layaableh, maanta waxaan ka helay e-mayl qoyskeyga oo safar ku tegey in lagula taliyey in dib loo baddalo markabku marki la xiro sababo la xiriira xiritaanka dekedda ee Hong Kong. Markii aan la xiriiray Costco arrintan, waxaa la ii sheegay tan iyo markii aan baajnay ka hor inta aan markabka la safrin, 4teenuba xaq uma lihi dib u celinta 10% ama 25% dhibcaha markab kale oo dhammaan rakaabku ay geesinnimo ugu filnaadeen in ay raacaan markabka dalxiiska. hadda ka hel NCL.
Mar labaad, tani waa nooca aynaan doonayn inaan la kulanno, gaar ahaan hooyaday oo waayeel ah. ”
Pua ayaa intaas ku daray: "Qaddarka lacagta runti maahan qodobka kaliya ee kiiskan sidoo kale xaqiiqda ah inaanan iibsanin caymiska saxda ah, qof kasta oo dalxiis iyo dalxiis safar ayaa fahmaya waxa adduunka ka socda ee virus-kan. . Halkii ay khatar ugu jiri lahayd dad badan inay qaadaan fayraskan shirkadaha safarka ayaa dadka u oggolaanaya inay ku joojiyaan lacag celin ama dhibco. NCL waxay ku saabsan tahay shirkadda kaliya ee aan tan oggoleyn. Qofna ma filayo in fayras dilaa ah uu sida ugu dhakhsaha badan ugu faafo sida kan oo kale! ”
Hadda, Princess Cruises waxay markab ku haysataa karantiil gudaha Japan oo ay la socdaan 10- rakaab ah. Laba rakaab ah oo saarnaa Princess Cruises ayaa ka yimid Hawaii. Pua wuxuu yiri: “Taasi waxay sifiican u noqon laheyd markabkeena. Guntii iyo gunaanadkii ma aanan baajin sababta oo ah kaliya ma dooneyno inaan aadno, waan baajinay sababtoo ah ma dooneyn inaan qatar galino nolosheena si aan fursad ugu helno inaan qaadno fayraskan, oo aan ku xusno waaxdeena Hawaii ee Caafimaadka Gudoomiye Cige, CDC iyo WHO waxay dadka kula talin jireen hadii aysan muhiim ahayn in loo safro Aasiya “HA AADIN”.
“Waxaan u maleynayaa in NCL aysan caqli gal aheyn fahamka xaalada aan ku sugan nahay isla markaana ay tahay mid aad u madax adag oo aan noo ogolaaneyn wax celin ama amaah ah! “
“Waxaan ku xajisanay boos celinteena iyadoo loo marayo Costco Travel mana jirin waqti naloo siiyay caymiska qaaliga ah ee“ JOOJI QAAB KASTA ”.
“Kama iibsanin caymiska ilaalinta diyaaradeyda ama hoteelkeyga midna midkoodna laakiin dhammaantood way fahmayeen waxayna noo ogolaadeen inaan baajinno dhibaato la’aan.
“Norwegian Jade way awoodi kari weyday inay ku soo xirto Hong Kong rakaabkii waxay u baxeen Hanoi waxayna dib ugu laabteen Singapore halkaas oo dhamaan martida saarneyd ay ku qasbanaadeen inay diyaarado iyo hoyga badalaan!
Muddo 45 sano ah oo aan ka shaqeynayay Warshadaha Dalxiiska ee Hawaii, weligay ma arag shirkad ama shirkad sidan oo kale u cafin oo aan rabin inay ku caawiso!
Waxaan warqaddayda ugu dambaysa u dirayaa agaasimaha guud and Madaxweynaha NCL, Frank Del Rio anigoo rajeynaya inuu fahmi doono xaaladdayda oo uu cafiyi doono inuu noo ogolaado lacag celin ama amaah. Runtii way fiicnaan laheyd haddii NCL ay si toos ah ila soo xiriiri laheyd walaac.
“Waxaa jira siyaasado iyo hanaan shirkad waliba leh laakiin mararka qaarkood waa inaan fahamno, cafino oo aan is dhigno macaamiisha isla markaana aan ka baxno sanduuqa banaanka! “
Waxaa laga yaabaa in Pua Morrisson ay haysato dacwad aad u wanaagsan oo ay ku murmi karto kaarka deynta ee ay siiso shirkadda 'Norwegian Cruise Line' ee 'Citibank'
Tallaal cusub oo COVID-19 ah oo laga sameeyay Shiinaha ayaa helay...
Ku Soo Dhowoow IMEX America Hadda Oo Maalin Kaliya Ka Jirto